बार्सिलोनाले ४–० को नतिजा उल्टाउन सक्ला ? | Hamro Khelkud
बार्सिलोनाले ४–० को नतिजा उल्टाउन सक्ला ?
बार्सिलोना (एजेन्सी)– बार्सिलोना यसपटक च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टरफाइनलमा पुग्न सक्ला भन्ने कौतुहलताको विषय रहेको छ । पिएसजी विरुद्ध च्याम्पियन्स लिगअन्तर्गत १६ को पहिलो लेग ४–० ले गुमाएको बार्सिलोनालाई अघिल्लो चरणको यात्रा कठिन छ ।
तर, टोलीका प्रशिक्षक लुइस एन्रिकेलाई आफ्नो टोली प्रति पुरा विश्वास रहेको बताउँछन् । उनले भने,‘ हामी नतिजा उल्टाउँदै प्रतियोगितामा अघि बढ्नेछौं । ४–० को नतिजा उल्टाउन नसके बार्सिलोनले सन् २००७ यता पहिलो पटक अन्तिम १६ बाट बाहिरिने छ ।
‘फुटबलमा जे पनि हुन्छ र हाम्रा खेलाडीमा जितका लागि चाहिने सबै चिज छ । उनी ४ गोल गर्न सक्छन भने हामी ६ फर्काउन सक्छौ ,’ एन्रिकेले भने,‘ हामि खेल जित्नेछौ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौ । हामी खेलको कुनै समय पुनरागमनको नाजिक पुग्नेछौ , उनले थपे ।
त्यस्तै बार्सिलोनाका स्ट्राइकर लुइस स्वारेजले आफ्नो टोलीले धैर्यताका साथ खेल्नु पर्ने बताएका छन् । ‘हामी असम्भव मिसनलाइ सम्भव पार्न प्रयास गर्नेछौ । त्इसका लागि हामीले धर्यतापूर्वक खेल्नुपर्ने हून्छ,’ उनले भने, ‘ यो ५ मिनेटमा नतिजा आउने खेल होइन । हामीले पहिले गोल खाए खेल हाम्रो हातबाट जानसक्छ ।’